“Madagaslam” : hisy ny “SlamMédia” ho an’ny rehetra | NewsMada
“Madagaslam” : hisy ny “SlamMédia” ho an’ny rehetra
Karazan-javakanto misokatra ho an’ny rehetra, mankafy sy manan-talenta amin’ny fampiasana teny miady rima, ny “slam”. Manome sehatra hanehoan’ny sokajin’olon-drehetra ny talentany ny fikambanana Madagaslam.
Ankoatra ny fifaninanana nasionaly, “Slam-National”, mikarakara ny antsoina hoe “SlamMédia” ihany koa izy ireo. Fifaninanana iray izy ity. Tsotra ny fandraisana anjara : samy maka rakitsary na « vidéo » ny tenany eo am-pamakiana ny lahatsorany. Alefa any amin’ny Madagaslam izany, avy eo. Tsy mihoatra ny lahatsoratra iray isaky ny mpandray anjara ary tsy mihoatra ny telo minitra sy folo segondra izany, tsy ahenoana feon-kira na haingony hafa. Hatramin’ny 30 novambra ny fandraisana ny sanganasan’ireo te hifaninana.
Halefa mandritra ny « SlamMédia », hatao etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely ny 6 desambra izao, ireo sanganasa tsara indrindra. Hisy ny loka hatolotra ireo hita fa mendrika.
Etsy ankilan’izay, efa mandeha ny fifanintsanana any amin’ny renivohitra valo (Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Taolagnaro ary Toliara) hiatrehana ny « Slam-National » amin’ity taona 2017 ity. Inoana sahady fa tsy ho vitsy ireo handray anjara hifaninana amin’izany.
Izay mandresy any amin’ny faritra no hiakatra eto an-dRenivohitra, hiatrika ny famaranana. Antenaina fa tsy ho very maina koa ny ezak’ireo mpandray anjara ka mba afaka hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ny mendrika indrindra amin’ity taona ity, tsy toy ny tamin’ny taon-dasa.